I-Ultrasonication yindlela ephumelelayo futhi elula yokukhiqiza i-magnesium hydride yokugcina i-hydrogen. I-Ultrasound isheshisa i-hydrolysis ye-magnesium ne-hydrogen ukuze yakhe i-magnesium hydride. Ngokuphambene nenqubo ejwayelekile ye-dissociative chemisorption, i-ultrasonic hydrolysis ye-magnesium hydride isebenza ekamelweni lokushisa kanye nengcindezi ye-ambient. Lokhu kwenza umzila we-sono-chemical ube lula, uphephe futhi utholakale kalula. Ukusebenza okuphezulu kwe-ultrasound kuvumela ukukhiqizwa okusheshayo nokusheshayo kwama-bulbs amakhulu we-magnesium hydride.
I-Magnesium Hydride Yokugcina i-Hydrogen
Magnesium hydride, MgH2, idonse ukunakekelwa kabanzi njengenketho yokugcina i-hydrogen. Izinzuzo eziyinhloko insiza yayo eningi, ukusebenza okuphezulu, isisindo esincane, izindleko eziphansi nokuphepha. Ngokuqhathanisa namanye ama-hydride angasetshenziswa ekugcineni i-hydrogen, i-MgH2 inokuxinana okuphezulu kakhulu kokugcina i-hydrogen kuze kufike ku-7.6 wt%. I-Hydrogen ingagcinwa eMg ngendlela yama-hydride wensimbi asuselwa kuMg. Inqubo yokuhlanganiswa kwe-MgH2 yaziwa njenge-dissociative chemisorption. Indlela ejwayelekile yokukhiqiza i-hydride yensimbi esuselwa ku-Mg kusuka ku-Mg naku-H2, ukwakheka ezingeni lokushisa lika-300-400 ° C kanye nengcindezi ye-hydrogen engu-2.4-40 MPa. Isibalo sokwakheka sihamba ngokulandelayo: Mg + H2 ⇌ MgH2
Ukwelashwa kokushisa okuphezulu kuza nemiphumela yokwehliswa okukhulu kwama-hydride, njengokufakwa kabusha kwesisekelo, ukwahlukaniswa kwesigaba, ukuhlanganiswa kwe-nanoparticles njll. Enye indlela engeyona eyokushisa futhi elula kakhulu yindlela i-hydrolysis ekhuthazwa nge-ultrasonically ye-magnesium hydride ekamelweni lokushisa kanye nengcindezi ye-ambient.
I-homogenizer ye-ultrasonic UIP16000hdT ngokuhlanganiswa okusebenzayo kwe-magnesium hydride eningi yokugcina i-hydrogen
I-Ultrasonic Hydrolysis yeMagnesium Hydride
I-Ultrasonication yaziwa kakhulu ngamandla ayo okuqala nokusheshisa ukusabela kwamakhemikhali, ukuthonya izindlela zamakhemikhali nokwenza ngcono ukusebenza kahle kokuphendula. Imiphumela ezuzisayo yemvamisa ephansi, amandla amakhulu e-ultrasound ekuphenduleni kwamakhemikhali yaziwa njenge-sono-chemistry.
I-Power ultrasound isivele isetshenzisiwe ekuphenduleni okuningi okungafani, ama-catalyses kanye nama-syntheses ku-R&D nesigaba sezimboni ukwandisa isivuno, isilinganiso sokuguqulwa kanye nokusebenza kahle kokuphendula. Ngokuhlanganiswa kwe-hydrolytic ye-magnesium hydride, i-sonication ibonakaliswe ngokwesayensi ukuthi inenzuzo enkulu futhi.
I-Sonication ithuthukisa ukudluliswa kobuningi ngaleyo ndlela isheshise ukusabela, futhi isiza ukunqoba izithiyo ze-thermodynamic kanye ne-kinetics. Amandla okushisa, okungukuthi ukushisa, ayadingeka ukushayela izinqubo zokumunca / ukukhipha i-hydrogenation ku-magnesium. Ukusetshenziswa kwemithombo yamandla kagesi ashisayo engaqondile njenge-ultrasound yamandla kungenye indlela ephumelelayo yokunqanda i-magnesium hydride.
Iqembu locwaningo likaHiroi et al. (2011) uphenye umphumela we-ultrasonication kumaza ahlukahlukene ku-hydrolysis ye-magnesium hydride (MgH2). Bathole ukuthi imvamisa ephansi ye-ultrasound ibiyindlela ephumelela kunazo zonke ukuze kutholakale izinga lokuguqulwa eliphakeme. Izinga le-hydrolysis elisezingeni eliphansi le-sonication "lifinyelele phezulu kuma-76% ngokwezinga lokuphendula kuma-7.2 ks kumvamisa we-ultrasonic ka-28 kHz. Leli nani beliphindaphindwe izikhathi ezingaphezu kwezingu-15 inani elitholakele ngesampula engeyona eye-sonicated, okukhombisa ukuminyana okulingana ne-hydrogen engu-11.6 mass% ngesisindo sesisindo se-MgH2. ”
Imiphumela iveze ukuthi i-ultrasound izothuthukisa ukusabela kwe-hydrolysis kwe-MgH2 ngokwandisa isilinganiso sokuphendula njalo ngenxa yokwenziwa kwe-radical and exfoliating the passive layer of Mg (OH) 2 over the unreacted MgH2 because of the generation of large shear forces. (UHiroi et al. 2011)
Inkinga: I-Slow Hydrolysis yeMagnesium Hydride
Ukuphakanyiswa kwe-MgH2 hydrolysis nge-milling yebhola, ukwelashwa kwamanzi ashisayo noma izithasiselo zamakhemikhali kuphenyiwe, kepha akutholakalanga ukukhulisa izinga lokuguqulwa kwamakhemikhali ngendlela ephawulekayo. Mayelana nokwengezwa kwamakhemikhali, izithasiselo zamakhemikhali, ezinjengama-buffering agents, ama-chelators, nama-ion exchanges, okusize ukuvimbela ukwakheka kongqimba oludlulayo lweMg (OH) 2, kukhiqize ukungcola enqubweni yokuhamba ngebhayisikili yangemva kukaMg.
Isixazululo: Ukuhlakazeka kwe-Ultrasonic kweMagnesium Hydride
Ukusabalalisa kwe-Ultrasonic nokugaya okumanzi kuyindlela esebenza kahle kakhulu yokukhiqiza izinhlayiya ezinama-nano namakristalu anejika elincane kakhulu lokusatshalaliswa. Ngokusabalalisa i-magnesium hydride ngokulinganayo ngosayizi we-nano, indawo esebenzayo iyakhuliswa kakhulu. Ngaphezu kwalokho, i-sonication isusa izingqimba ezihamba phambili futhi inyuse ukudluliswa kwesisindo samazinga aphezulu wokuguqulwa kwamakhemikhali. I-Ultrasonic milling, i-dispersing, i-deagglomeration kanye ne-particle surface yokuhlanza ihamba phambili kwezinye izindlela zokugaya ngokusebenza kahle, ukwethembeka nokulula.
I-Ultrasonicator I-UIP1000hdT wokuqhutshwa okuqhubekayo okusemgqeni kwe-magnesium hydride
I-Ultrasonic wet-milling nokusabalalisa kuyindlela ephumelela kakhulu yokunciphisa usayizi wezinhlayiyana, isb ye-magnesium hydride
I-Ultrasonic Nanostructuring ye-MgH2
Usayizi we-nano / nano-structured magnesium based such as MgH2 nanoparticles kanye nama-nanofibres angathuthukiswa ngokunciphisa usayizi wezinhlayiyana nosayizi, ngaleyo ndlela kunciphise ukwakheka kwe-hydride enthalpy ΔH. I-Ultrasonic nanostructuring iyindlela esebenza kahle kakhulu evumela ukuthi kushintshe i-thermodynamics ye-magnesium hydride ngaphandle kokuthinta amandla e-hydrogen. Ama-nanoparticles we-ultra-fine MgH2 akhombisa umthamo owenziwe ngcono kakhulu we-hydrogen desorption.
I-Ultrasonic Ikhuthaza iMagnesium Hydride Synthesis
Izinga lokuguqulwa eliphakeme
Ukususwa kwezendlalelo ezidlulayo
I-NanHMH2 eyakhiwe kabusha
Ukuthuthuka kwe-hydrogen sorption
Ama-Ultrasonicators Wokusebenza Okuphezulu we-MgH2 Hydrolysis
Sonochemistry – ukusetshenziswa kwamandla e-ultrasound ekuphenduleni kwamakhemikhali – ubuchwepheshe bokucubungula obunokwethenjelwa, obusiza futhi bukhawulezise ukuhlanganiswa, ukusabela okunezinye izindlela kanye nokunye ukusabela okungafani. Iphothifoliyo yeHielscher Ultrasonics ihlanganisa uhla oluphelele kusuka kuma-compact lab ultrasonicators kuya kuma-sonochemical systems wezinhlobo zalo lonke uhlobo lwezicelo zamakhemikhali njenge-hydrolysis ye-magnesium hydride ne-nano-milling / nano-structuring yayo. Lokhu kusivumela kwaHielscher ukukunikeza i-ultrasonicator efaneleke kakhulu kunhlanganisela yakho ye-MgH2 ocatshangelwe. Abasebenzi bethu besikhathi eside abanolwazi bazokusiza ekuhlolweni okungenzeka nasekusebenziseni inqubo ekufakweni kohlelo lwakho lwe-ultrasonic ezingeni lokugcina lokukhiqiza.
Ukuphrinta konyawo oluncane kwama-homogenizers ethu e-ultrasonic kanye nokuguquguquka kwawo ekukhethweni kokufaka kubenza balingane ngisho nasezikhungweni zokucubungula isikhala esincane. Amaprosesa we-Ultrasonic afakwe emhlabeni wonke ku-chemistry enhle, i-petro-chemistry, kanye nezindawo zokukhiqiza ze-nano-material.
I-sonochemical equipmment kaHielscher ingasetshenziselwa ukuqhutshwa nokuqhutshwa kokugeleza okuqhubekayo. Ukucubungula kwe-batch ultrasonic kufanelekile ekuhlolweni kwenqubo, ukwenziwa kahle futhi kube sezingeni eliphansi lokukhiqiza likasayizi ophakathi. Ngokukhiqiza inani elikhulu lezinto zokwakha, ukucubungula okusemgqeni kungaba lusizo kakhulu. Inqubo eqhubekayo yokuxuba emugqeni idinga ukusethwa okuyinkimbinkimbi – equkethe iphampu, amapayipi noma amapayipi namathangi -, kodwa isebenza kahle kakhulu, iyashesha futhi idinga abasebenzi abancane kakhulu. I-Hielscher Ultrasonics inokusetha okufanele kakhulu kwe-sonochemical kokuphendula kwakho kwe-sono-synthesis, ukucubungula ivolumu nezinhloso.
Ama-Ultrasonic Probes nama-Reactors we-MgH2 Hydrolysis nganoma yisiphi isilinganiso
Uhla lomkhiqizo we-Hielscher Ultrasonics lumboza ububanzi obugcwele bama-processor we-ultrasonic kusuka kuma-compact lab ultrasonicators ngaphezulu kwebench-top kanye nezinhlelo zokushayela kumaprosesa asezimboni asebenza ngokugcwele anamandla wokucubungula ukulayisha amaloli ngehora. Uhla lomkhiqizo ogcwele lusivumela ukukunikeza i-homogenizer efaneleke kakhulu ye-ultrasonic yenqubo yakho yamandla nezinhloso zokukhiqiza.
Izinhlelo ze-ultrasonic benchtop zilungele ukuhlolwa kokusebenza kanye nenqubo yokwenza ngcono. Ukulinganiswa komugqa ngokuya ngemingcele yenqubo esungulwe kwenza kube lula kakhulu ukukhulisa amandla wokucubungula kusuka ezinkatho ezincane kuya ekukhiqizeni ngokugcwele ukuthengisa. Ukukhuphula amandla kungenziwa ngokufaka iyunithi enamandla kakhulu ye-ultrasonic noma ukuhlanganisa ama-ultrasonicators amaningi ngokufana. Nge-UIP16000, i-Hielscher inikeza i-homogenizer ye-ultrasonic enamandla kunazo zonke emhlabeni.
Onke ama-ultrasonicators aseHielscher alawulwa kahle futhi ngaleyo ndlela enokwethenjelwa amahhashi omsebenzi ekukhiqizeni. I-amplitude ingenye yezinqubo ezibalulekile zenqubo ezithonya ukusebenza kahle nokusebenza kwe-sonochemical reaction
Amasethingi we-amplitude aqondile nokuqapha unomphela kwemingcele yenqubo ye-ultrasonic nge-smart software kukunikeza ithuba lokuphatha ama-reagants akho ngezimo ezisebenza kahle kakhulu ze-ultrasonic. I-sonication efanelekile yezinga lokuguqulwa kwamakhemikhali elivelele!
Ukuqina kwemishini ye-ultrasonic ye-Hielscher kuvumela ukusebenza kwe-24/7 emsebenzini osindayo nasezindaweni ezifunayo. Lokhu kwenza imishini ye-ultrasonic yakwaHielscher ithuluzi lomsebenzi elithembekile eligcwalisa izidingo zakho zenqubo yamakhemikhali.
Izinzuzo zeMagnensium Hydride Yokugcinwa Kwe-Hydrogen
I-gravimetric efanelekayo, elinganisiwe
Amandla aphezulu amandla wevolumu
Kulula ukuphatha (noma emoyeni)
Ukusabela okuqondile ngamanzi kungenzeka
Ama-reaction kinetics angahle enzelwe izinhlelo ezithile
Ukusabela okuphezulu nokuphepha komkhiqizo
Okungasetshenzisiwe futhi okuphephile ukusetshenziswa
Yini iMagnesium Hydride?
I-Magnesium hydride (MgH2; eyaziwa nangokuthi i-magnesium dihydride) inesakhiwo se-tetragonal futhi ikhombisa uhlobo lwe-cubic crystal engenambala noma i-powder emhlophe. Isetshenziswa njengomthombo we-hdyrogen wamabhethri kaphethiloli ngaphansi kwe-10,000W. Inani le-hydrogen elikhishwa ngamanzi lingaphezulu kuka-14.8wt%, eliphakeme kakhulu kunenani le-hydrogen elikhishwe ngethangi lokugcina i-hydrogen tank (highMPH, ~ 5.5wt%) kanye nezinto zokugcina izinto zensimbi esindayo (<2wt%). Furthermore, magnesium hydride is safe and highly efficient, which turns it into a promising technology for efficacious hydrogen storage. Hydrolysis of magnesium hydride is used as supply hydrogen system in proton-exchange membrane fuel cells (PEMFC), which improve energy density of the system significantly. Solid / semi-solid Mg-H fuel battery systems with high-energy density are also in development. Their promising advantage is an energy density 3-5 times higher than that of lithium-ion batteries. Synonyms: Magnesium dihydride, magnesium hydride (hydrogen storage grade) Used as material for hydrogen storage Molecular Formula: MgH2 Molecular Weight:26.32 Density:1.45g/mL Melting Point:>250 ℃
Ukuncibilika: akunakunyibilika kwisisombululo esijwayelekile semvelo